Apple inotangisa iyo Beta 7 ye iOS 11 uye mamwe masisitimu | IPhone nhau
Apple inotangisa iyo Beta 7 yeIOS 11 nemamwe masisitimu
Maminitsi gumi chete apfuura takadzidza kuti Apple yanga ichitangisa iyo 11th beta yevagadziri veIOS XNUMX, zvinoreva kuti iyo Cupertino kambani haina kuronga kusevha kana kuenda kuzororo gore rino, zvirinani kana tichifunga nezve muyero wekuvandudzwa kuBeta iyo iri kupa, uye kuti munguva pfupi inoratidzika kwandiri senge iri pamusoro peiyo yeimwe editions.
Ndiwo maitiro Apple yakaburitsa nhasi Beta yechinomwe yevagadziri veIOS 11 uye isu tiri munzira yekuisa iyo yekuvandudza ... Iwe unoda kuziva here kuti chii icho ruzivo? Isu tinofungidzira kuti Apple ichiri mune yegumi nematatu kuti ipe zvishoma kana kusaenderera mberi.
Uye aya ndiwo mawaniro atinoita iyi beta kuti mune iyo iPhone 6s uye iyo iPhone 7 inobata zvishoma kupfuura 100 MB, kuitira kuti priori isu titore sezvisina basa izvozvo isu takatarisana neyekare tsikidzi faindi uye kugadzirisa (bug fixes uye kugadzirisa mashandiro) zvakajairika mumhando iyi yemabheta. Kutaura chokwadi, iyo Beta yechitanhatu yeIOS 11 yave iri yepamusoro kusvika pari zvino, sezvo ichivandudza zvakanyanya kuita kwebhatiri pane iyo iPhone. Tichaenderera mberi nekuisa iyo yekuvandudza uye isu tinotarisira kuti hatizowane kuderera mukuzvitonga.
Uye hatitaure nezvazvo turkey mucus, chokwadi ndechekuti kuzvimiririra kweIOS 11 Beta 6 hakusiye chinhu chekugodora icho cheIOS 10.3.3. Anoda kuziva kutaura zvishoma kuti Apple yakafunga kuburitsa yekudzosera kuBeta yayo manheru ekuora kwezuva. Imwe tsananguro ndeyekuti haina kuvhurwa zvakanyanya pa19: 00 masikati nguva yeSpanish sezvatakambojaira. Uye apo ini pandinonyora iyi mitsara maitiro ekuvandudza ari kufambira mberi, saka isu tichavandudza posvo nechero nhau dzinogona kumuka maererano nemashandiro kana mashandiro.
Zvakare tvOS 11 uye macOS Yakakwira Sierra 10.13
Apple's smartwatch inoshanda sisitimu inoita senge yakagamuchira gadziriso, asi hongu zvinoita macOS uye tvOS 11. Kana iwe uchida kuziva nezvenhau dzese padanho reMac, ive shuwa yekumira neSoydeMac, yedu hanzvadzi hanzvadzi, uye tsvaga zvakadzama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa iyo Beta 7 yeIOS 11 nemamwe masisitimu
Sol's Apple Store izere nemidziyo inopisa